သာလွန်ဇောင်းထက်| February 20, 2013 | Hits:40,935
| | ဗဟိုဘဏ်က အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် ကျပ်ငွေ ၈၈၀ နှင့် ၈၆၆ ကျပ်အကြား ရည်ညွှန်းငွေလဲနှုန်း သတ်မှတ်ထားသည် (ဓာတ်ပုံ – ဂျေပိုင် / ဧရာဝတီ)
K Z Y Htun February 20, 2013 - 8:08 pm Not all the FDI supports the country’s economy. Especially in retail sector, FDI in retail sector will lead to loss of jobs….
Reply ရာဇာ February 20, 2013 - 8:36 pm သူတို့တွေလဲ အိတ်ဖောင်းလို့ လျှံကျတော့ မှဘဲ ၁ ဒေါ်လာ ၆ ကျပ်ဈေးကို ဖျက်တော့တယ်…အရင်တုံးကတော့ ဓါတ်ငွေ့ သစ် နဲ့ ကျောက်မျက် ရောင်းလို့ ရတဲ့ ဒေါ်လာတွေ ကိုကျတော့ အစိုးရ ရဲ့ ငွေစာရင်းက ကျပ်ငွေ နဲပ ဖြစ်လို့ ၁ ဒေါ်လာ ကို ၆ ကျပ်နဲ့ တွက်ပြီး အစိုးရ ထဲပြန်ထဲ့ကြတယ်….ဒေါ်လာတွေကတော့ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အကောင့်တွေထဲ ရောက်သွားရော…ဒေါ်လာ ၁၀၀ မှ ကျပ်ငွေ ၆၀၀ ဘဲ ပေးရတယ်လေ…ဒေါ်လာ တစ်သန်း ကို ကျပ်ငွေ သိန်း ၆၀ နဲ့ လဲလို့ ရမှတော့ သိန်း၆၀၀ ပေးရင် ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းရပြီလေ…ဒါကြောင့် သူတို့တွေ ဒေါ်လာ သန်းချီပြီး ချမ်းသာနေတာ မဆန်းပါဘူး….
Reply Shwe Thway February 20, 2013 - 11:49 pm The good sign to bring back solid financial system. In the past, Burmese currency is no more thanapaper. It is even worthless than toilet tissue in abroad.
Reply ml February 21, 2013 - 3:43 am မြန်မာငွေ တန်ဘိုးတက်လို့ မဖြစ်ဘူး။ ငွေလဲနှုန်း ကျပေမယ့် ကုန်ဈေးနှုန်းကမှ မကျတာ။ ငွေလဲနှုန်းမှာ ၈၅၀ အောက်ရောက်သွားရင် ပြည်ပမှာ အလုပ်သွားလုပ်ပြီး ပြည်တွင်းက မိဘ၊ မိသားစုကို ထောက်ပန့်နေသူတွေ အခက်တွေ့ကုန်မယ်။
Reply မင်းကြီးညို February 23, 2013 - 6:57 pm မြန်မာကျပ်ငွေတန်ဘိုးတက်မှဖြစ်မှာပါ။ ကျပ်ငွေတန်ဘိုးတက်နေစဉ်က မြန်မာကျပ် ၁၀၀၀ ကို
Reply mgmgaye March 2, 2013 - 9:00 am မင်းကြီးညို ပြောတာသဘာဝ ကျတယ် အားလုံး ကို ချိန် ညှိရမယ် – တဘက်တည်းတင်/ချလို့မရဘူး